Ikamelo Elinemibhede Emine: Kulungele Abangane - I-Airbnb
Ikamelo Elinemibhede Emine: Kulungele Abangane
355 okushiwo abanye
Chicago, Illinois, i-United States
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Freehand
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Freehand izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Freehand Hotel ilungele abantu abashadile, abahamba bodwa nabantu abahamba ngebhizinisi. Jabulela i-vibe ethokomele nejwayelekile eklanywe amaRoma & Williams eMfuleni i-North Chicago, amabhuloho amabili nje kuphela ukusuka e-Magnificent Mile. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kwezokuthutha zomphakathi, i-Pier Pier, nokuningi. Lendlu eyakhelwe ikamelo elingasese elinamasethi amabili wemibhede emibili (ingqikithi yemibhede emine) negumbi lokugezela elingaphakathi. Sicela usithumele umyalezo nganoma yimiphi imibuzo.
Imali engu- $ 10 yezindleko ze-resort yasebusuku kanye nentela ekhokhwa endlini
Leli kamelo langasese lihlelwe ngamasethi angu-2 wemibhede emibili (ingqikithi yemibhede engu-4), ikamelo lokugezela langasese, kanye nama-locker okugcina izinto eziyigugu. I-bunk ngayinye inekhethini yobumfihlo, isibani sokufunda, kanye nokuphuma kogesi. Amashidi namathawula afakiwe, njengoba kuyisevisi evamile yokunakekela indlu. Sicela ubuze indawo yokwamukela izivakashi uma udinga noma yikuphi okwengeziwe.
Ekuhlaleni kwesikhathi eside, izivakashi kufanele zihambise amakamelo cishe njalo ngemva kwezinsuku ezingu-30.
Besides your private bedroom, you will have access to all public spaces and amenities at the hotel including the Broken Shaker cocktail bar. Coin-operated and valet laundry are available.
Ukuze ungene, ihhotela lidinga izivakashi kufanele zibe neminyaka engu-18 noma ngaphezulu nge-ID yesithombe ekhishwe uhulumeni. Igumbi lakho nentela kuzokhokhwa kusengaphambili nge-Airbnb, kodwa ihhotela lidinga idiphozithi engu-$50 uma kwenzeka kwenzeka okuthile ekhadini lapho ungena ekamelweni, ngokuhlala ngakunye. Asiwamukeli amakhadi esipho, amakhadi akhokhelwa kusengaphambili, noma ukheshi ngezigameko. Idiphozi izobuyiselwa ekhadini lakho ekuphumeni inqobo nje uma ungakhokhisi lutho ekamelweni lakho. Kuthatha amabhange amaningi izinsuku zebhizinisi ezingu-3-10 ukucubungula ukukhishwa.
$10 imali yokuvakashela ubusuku kanye nentela ekhokhwa endaweni
Ngokuhlala isikhathi eside, izivakashi kufanele zithuthe amagumbi cishe njalo ezinsukwini ezingu-30.
I-Freehand Hotel ilungele abantu abashadile, abahamba bodwa nabantu abahamba ngebhizinisi. Jabulela i-vibe ethokomele nejwayelekile eklanywe amaRoma & Williams eMfuleni i-North Chicago, amabhuloho amabili nje kuphela ukusuka e-Magnificent Mile. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kwezokuthutha zomphakathi, i-Pier Pier, nokuningi. Lendlu eyakhelwe ikamelo elingasese elinamasethi amabili wemibhede emibili (ingqikithi ye…
4.60 out of 5 stars from 355 reviews
4.60 (izibuyekezo ezingu-355)
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-355
19 E Ohio St, Chicago, IL 60611, USA
I-Freehand Chicago iseduze nekhona lase-Ohio ne-State st. Imaphakathi nedolobha enkabeni yoMfula North, ibhulokhi elingu-1 ukusuka ku-Magnificent Mile, ibhulokhi elingu-1 ngaphesheya koMfula ukusuka e-The Loop, kanye nohambo olusheshayo, ibhasi, isitimela, noma itekisi ukuya noma yikuphi lapho udinga ukuya khona. Futhi sitholakala kalula ngaphesheya komgwaqo ukusuka ku-Jewel, uchungechunge lwesitolo esikhulu segrosa.
Freehand Chicago is housed in a 1927 building in Chicago’s vibrant River North neighborhood – home to some of the city’s best art galleries, boutiques and restaurants. Freehand is a collection of hotels that combine the social culture of a hostel with innovative design, award-winning food and beverage, and a community-driven atmosphere. Each Freehand takes its cues from the surrounding neighborhood, with spaces that are a microcosm of the best each city has to offer.
Freehand Chicago is housed in a 1927 building in Chicago’s vibrant River North neighborhood – home to some of the city’s best art galleries, boutiques and restaurants. Freehand is…
Ideski lethu langaphambili linabasebenzi amahora angama-24 ngosuku lokungena, ukuphuma, nokukusiza ngezinye izicelo.
Inombolo yepholisi: R18000024404
Hlola ezinye izinketho ezise- Chicago namaphethelo